Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fisamborana vaksinin'ny polisy frantsay dia tsy mahazo miasa ao amin'ny kafe any Paris
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Kolontsaina • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Kafe an'arabe maro no nipetraka foana tsy nisy naninona satria ny mpanjifany mahazatra dia nisafidy ny hipetraka amin'ny dabilio ampahibemaso any ivelany.
Macron dia nanitatra ny vaksinina ho an'ny trano fisakafoanana.
Ireo tsy manana pass dia miatrika lamandy 135 €.
Miakatra hatramin'ny 9,000 € ny onitra noho ny fandikan-dalàna miverimberina.
Androany, nanitatra ny baikon'ny 'pass sanitaire' mampiady hevitra any amin'ny toeram-pisakafoanana ny governemantan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron, anisan'izany ireo any ivelany, tsy niraharaha ny faran'ny herinandro teo ny fihetsiketsehana faobe nanerana an'i Frantsa.
Nanomboka niditra tao amin'ny trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana ny polisy frantsay ary nampihatra ny fepetra takiana amin'ny fahazoana mizana vaksiny, ka nahatonga ny latabany maro ho foana nandritra ny fotoam-pisakafoanana mazàna, satria ny vahoaka frantsay kosa natory teo amin'ny dabilio ho an'ny daholobe.
Miatrika lamandy € 135 ($ 158) ny mpiambina ny trano fisakafoanana sy ny cafe tsy misy pas, izay hitombo 9,000 ($ 10,560) noho ny fandikan-dalàna indray.
Tamin'ny fisakafoanana antoandro dia kafe fisakafoanana marobe no nipetraka foana foana satria ny mpanjifany mahazatra dia nisafidy ny hipetraka eo amin'ny dabilio ampahibemaso any ivelany - araka ny sary sy ny fanehoan-kevitra marobe napetraka tao amin'ny media sosialy.
Ny horonan-tsary sy sary media sosialy dia nampiseho toerana ivelany misy fisakafoanana vitsivitsy ao amin'ny Champs Élysées, Paris'lalana lehibe.
Misy sarin'ireo latabatra foana manerana ny tanàna amin'ny fotoana izay feno matetika ny toerana toy izany.
Ilay Grande Brasserie malaza, akaikin'ny kianjan'i Bastille, dia nisy mpanjifa vitsivitsy tao anatiny, saingy tsy nisy nivoaka ny tokotaniny.
Ny pass, izay natolotr'i Macron hanerena ny vaksiny fanoherana ny Covid-19, dia voatery hiditra amin'ny tranombakoka, teatira sarimihetsika, dobo filomanosana ary toerana hafa nanomboka tamin'ny 21 Jolay. , ny sasany amin'izy ireo dia nitokona ho fanoherana.
Manoloana ny fitomboan'ny isan'ny tranga COVID-19 noho ny fihenan'ny virus Delta, dia nanery mafy ny fitondrana vaksiny ny olon-drehetra ny manampahefana frantsay. Mandritra izany fotoana izany, ireo mpanao vaksiny Pfizer ary maoderina nampitombo ny vidin'ny vaksinin'izy ireo tao amin'ny Vondrona Eropeana.